Mason jar Factory - Shiinaha Mason jar soo-saareyaasha, shirkado cusub
750ml weel wasakh ah oo raashin ah
Diyaarinta Cuntada iyo Kaydinta:
Weelka ugu fiican ee lagu diyaariyo saladhyadaada shaqo ama nooc kasta oo dibedda ah, waana wax weyn inaad cuntadaada ku hayso tiro isku mid ah oo cunto ah oo la diyaariyey maalin kasta ee usbuuca
Karaa oo ilaalin karaa saxmadaada iyo jeliyadaha aad jeceshahay iyo waxyaabo kaloo badan.
Meel fiican oo lagu keydiyo miro, bur, sonkor, cunno ey, ama cunto fudud! Waxaad sidoo kale ku keydin kartaa maraqa pizza, salsa, gazpacho, maraq, iyo sharoobada maple ee dhalooyinka sidoo kale!
500 ml koob maydh leh caws
Dhalooyinka dhaadheer ee muuska dhalada ah oo leh daboollo bir ah iyo caws
Koobab kaamil ah oo loogu talagalay cabitaannada isku dhafan, cabitaannada fudud iyo cabitaannada kale ee qabow
Ku habboon arooska, baararka, guriga, xafladda, ama kulan bulsheed kasta
Fikrad hadiyad weyn u ah asxaabta iyo qoyska
500ml weel galaas cunto ah
Kaydinta min yar ilaa weyn
Dhamaadka darafkeenna, waxaad ku raaxeysan kartaa weelkeenna caadiga ah ee afka, oo ah sheeko Mareykan ah oo kicisay cunnada cunnada ee guriga. Laakiin waxaa jira adeegsiyo badan oo casri ah oo loogu talagalay weelkan cabbirka caanka ah oo ay ku jiraan isku-darka buskudka lakabka leh, farshaxanka ciidda iyo xoqidda guryaha lagu sameeyo. Ka soo horjeedka weelka yar, wuxuu fadhiyaa afka weyn, balaaran ee Ball Mason Jar kaas oo ku haboon in lagu keydiyo casiirka ama tufaaxa, iyo sidoo kale adeegsiyo kale duwan sida keydinta xafiiska ama farshaxanka iyo sahayda farshaxanka
Laba Dhalo oo leh Laba Af oo Kala Duwan
Weelasha afka caadiga ah waa la dhajiyay oo waxay bixinayaan furitaan yar xagga sare, halka dhalooyinka ballaaran ee afka laga bixiyaa ay ka furan yihiin dusha sare. Waxa jira faa iidooyin u gaar ah nooc kasta oo furitaan ah, adiguna waad go aansan kartaa goorta iyo sida loogu isticmaalo nooc kasta qaab adiga kuu anfacaya isla markaana la jaan qaadi kara baahiyahaaga.
50ml weel jardiinada
FASALKA CUNTADA: Weel walboo masto ah ayaa laga sameeyaa maaddooyinka ku jira heerka cuntada, oo ku fiican keydinta cuntada. Jirka muraayadaha waara, daboolka qalinka ayaa ah shey sheybaar leh oo shey-xajis u leh una adkeysta heerarka amaanka ee FDA.
XIDHIIDHKA XANUUNKA: Hubso shaabad tayo leh oo leh dabool kasta. Qurux iyo Ficil ahaaneed, jikadaada ha ka buuxsamo dareenka cusub ee suugaanta iyo farshaxanka, dareenka gadaal, ha ahaato mid cusub muddo dheer!
JOOJINTA & QIIMEYNTA: Ku habboon macaanka, jelly, cuntada ilmaha, ixtiraamka arooska, dhir udgoon, malab ama hadiyadahooda guriga lagu sameeyo. Aad ugu fiican dhir udgoon, geedo yaryar, keeg iyo wixii la mid ah, oo ku habboon jikada, qolka fadhiga, qubayska iyo munaasabad kasta!
AMMAANKA DISHWARE: Nabdoonaanta weelka ayaa iyaga ka dhigaysa kuwo aad u fudud in la nadiifiyo, ama waad ku dhaqi kartaa biyo iyo saabuunyo, dhib la'aan!
500ml weel birta ah oo heer cunto ah
Badeecadani waxay ka samaysan tahay maaddooyin muraayad u leh bey’ada, oo qurux badan, waara, xirashada u adkaysta oo leh adeeg dheer.
Dhalada afkeedu waa mid siman oo wareegsan, dhalada afkeedana si farshaxanimo leh ayaa loo safeeyey. Waa amaan, siman oo wareegsan, dhalada hoosteeduna waa xoog iyo dhumuc weynaatay waana adag tahay waana xasilloon tahay
Midabka weelka ayaa ah midabka asalka ah ee muraayadda, kaas oo gacanta lagu afuufo oo aan lahayn dheeh daaweynta ka dib ah!
450ml qasacadle cunto-karis ah leh caws
480 ml koob oo wasakh galaas leh caws
500ml koob qasacadaysan oo caws leh
500ml weel jardiin leh caws
600 ml koob oo wasakh ah
Heerka cuntada 450mlml weel asli ah asal ahaan
200ml weel wasakh ah
Fududahay in la furo daboolka: Kunteenarada waxay leeyihiin dhaqso iyo fududahay in lagu shaqeeyo daboolka
Sheer, Eeg ilaa Daboolka: Waa fududahay in la aqoonsado waxyaabaha ku jira iyada oo aan loo baahnayn in mid kasta la furo
Jidhka Kala-baxa: Novel Shatterproof body making alwaax saameyn u adkaysi u leh
Stackable: Waad is dulsaari kartaa weelasha midba midka kale, Qasacadaha keydinta booska, Waxay kaa caawineysaa inaad abaabusho jikadaada
Hawada cimilan waxay ka madax bannaan tahay BPA (Bisphenol A), taas oo keenta khataro caafimaad marka ay taabato cuntada iyo cabitaannada, iyadoo la hubinayo qaab nololeed caafimaad leh iyadoo la adeegsanayo Bisphenol A Products free